Ururka Hor-Cad: Waxaanu haya Mucaarad la tartami doona Xisbiyada kale ee Puntland. (Dhegayso). – Radio Daljir
Ururka Hor-Cad: Waxaanu haya Mucaarad la tartami doona Xisbiyada kale ee Puntland. (Dhegayso).
Diseembar 10, 2012 7:59 b 0
Boosaaso, Dec 10, Afhayeenka Urur siyaasadeedka la magac baxay Ururka horumarka iyo Cadaaladda (Hor-Cad) Mudane Axmed Yaasiin Saalax oo Waraysi gaar ah siiyey Radio Daljir ayaa sheegay inay yihiin xisbi mucaarad ah oo marwalba ifin doona daldalooladda ka muuqda Xisbiga taladda haya.
Axmed Yaasiin Saalax oo ka jawaabayey eedaymo loosoo jediyey xisbiyadda Puntland lagaga dhawaaqay oo ku aadanayd inay gacan ka helayaan Xukuumadda Puntland ayaa sheegay inaysan dhici karin inay ka ag dhowaadaan Xisbiga taladda haya.
“Bulshadda Waxaan u sheegayaa inaanu nahay xisbi mucaarad ah oo samata bixin doona dadka” ayuu yiri Afhayeenka ururka Hor-Cad.
Wuxuu sheegay inay jiraan dad kaso horjeedda Xisbiyadda kuwaasoo uu sheegay inay rabaan nidaamka qabiilka kuwaasoo uu sheegay inaysan bulshadda u hayn wax dan ah.
“Waxaan u arkaa qofkii diidan xisbiyada inuusan dan u hayn bulshada” ayuu hadalkiisa raaciyey Mudane Axmed Yaasiin Saalax.
Hadalka Afhayeenka Urur Siyaasadeedka horumarka iyo cadaaladda Puntland ee Hor-Cad ayaa kusoo beegmay xili dhowaan Siyaasiyiin kasoo jeedda Puntland ay sheegeen in xiligan aysan suurtagal ahayn in Xisbiyo laga furo Puntland iyagoo ku an dacoonaya inuu dhamaaday wakhtigii Xukuumadda.
Munaasabad lagu xusayay tacadigii loo geestay Wariyaasha sanadanka sii dhamaanaya 2012ka oo Nairobi lagu qabtay.
Maalinta Xuquuqqul Insaanka oo laga xusay Garoowe (Sawiro)